चिनियाँ उत्पादनमा १० प्रतिशत कर – USNEPALNEWS.COM
चिनियाँ उत्पादनमा १० प्रतिशत कर
अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक युद्ध झनै चर्किएको छ । मंगलवार अमेरिकाले प्रस्ट रूपमा चीनबाट आयातित २०० अर्ब डलरको सामानमा १० प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी प्रशासनले आयात हुने चिनियाँ वस्तुको लामै सूची तयार पारेको छ जसमा अन्तःशुल्क लगाइनेछ । सयौं खानपिनका वस्तु, चुरोट, कोइला, रासायनिक पदार्थ, टायर, कुकुर र बिरालोले खाने कुरा, विद्युतीय वस्तु र टेलिभिजन लगायतका वस्तुमा कर लगाइँदैछ ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटजियरले प्रस्तावित शुल्क घोषणा गर्दै विगत लामो समयदेखि ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई आफ्नो बजार खोल्न लगाएपनि उसले नटेरेकाले उसका सामानमा शुल्क लगाइएको बताए ।
व्यापारको क्षेत्रमा गलत नीति अपनाउनुको साटो स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धा गर्नमा चीन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अमेरिकाको जायज चिन्तामा ध्यान दिनुको साटो चीनले बदलाको भावनाले काम गरेको उनको आरोप छ ।
अघिल्लो हप्ता अमेरिकाले ३४ अर्ब डलरको चिनियाँ आयातमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो र चीनले तत्कालै आफूकहाँ आयात हुने अमेरिकी सामानमा त्यति नै शुल्क लगाएको थियो ।
अमेरिकाका केही व्यापारिक समूह र वरिष्ठ सांसदले ट्रप प्रशासनको घोषणाको निन्दा गरेका छन् । सिनेटको आर्थिक समितिका अध्यक्ष तथा रिपब्लिकन पार्टीका सांसद ओरिन ह्याचले यो हतारमा लिइएको कदम भएको र यसमा सन्तुलित
दृष्टिकोण नराखिएको बताए ।
अमेरिकाको निर्णयबाट चीन स्तब्ध
by यूस नेपाल न्युज	 July 12, 2018
तपाईको पैसा काटियो, तर एटीएमबाट पैसा झरेन ? अब बैंकले ब्याजसहित फिर्ता गर्छ !
यमनमा जहाज दुर्घटना,६० बपत्ता।
by author-sapkota	 December 7, 2016
फुट्यो गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम
by यूस नेपाल न्युज	 October 15, 2017